Hay'adda MSF oo sheegtay in dagaalkii shalay ay waxyeelo ka soo gaartay Isbitaalka Dayniile.
War saxaafaeed ay soosaartay hay’adda dhaqaatiirta aan xaduuda laheyn ee MSF ayaa waxaa lagu sheegay in dagaalkii shalay ka dhacay degmada Dayniile ee gobolka Banaadir ay waxyeelo ka soo gaartaydhismaha Isbitaalka Dayniile oo ay haddau maamusho.
War saxaafadeedkaan ayaa waxaa lagusheegay in dagaalkii ka dhacay Dayniile ee dhex maray ciidama dadawlada oo garab ka helaya kuwa AMISOM iyo dhanka kale ee Xarakadda Al-Shabab ay sababeen bur bur soo gaaray qeybo kamid ah isbitaalka gaar ahaan qeybaha gar gaarka deg deg ah iyo qeybta qaliinadda ee Isbitaalka oo ay ha’addu sheegtay inay madaafiic ku dhaceen.
War saxaafadeedka waxaa lagu sheegay in inkastoo uusan jirin wax khasaaro nafeed ah oo soo gaaray shaqaalaha iyo bukaanadii jiifay haddana ay ha’addukawalaacsan tahay haddii sii socdaan dagaalada deegaankaasi ka jira.
Hay’adda dhaqaatiirtaaan xaduuda laheyn ee MSF waxay ugu baaqday dhinacyada Soomaalida ee dagaalada ku jira iyo ciidamada midawga Africa ee AMISOM inay ixtiraamaan goobaha caafimaadka oo aydagaalada ka bad baadiyan.